काठमाडौंको तिलगंगाबाट दश जनाको ग्याङ पक्राउ, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुन्छ ! – Patrika Nepal
मंग्सिर १४, २०७८ मंगलबार 94
काठमाडौँ – प्रहरीले रक्तचन्दनको ३३ लिटर तेलसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौंको तिलगंगाबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
यस्तै पक्राउ पर्नेहरु अन्यमा महाराजगंज बस्ने खोटाङ हलेसी नगरपालिका-६ घर भएका २३ वर्षीय घनश्याम आले मगर, ८ तिलगंगा बस्ने ५१ वर्षीय मदन पोडे, चावहिल बस्ने खोटाङ हलेसी नगरपालिका-९ घर भएका २० वर्षीय जीवन थापा, सामाखुसी बस्ने तनँहु भानू नगरपालिका-६ घर भएका २५ वर्षीय सुदिप थडराई, छाउनी घर भएका ५३ वर्षीय अनिल चरण श्रेष्ठ र सोही ठाउँ घर भएका ५१ वर्षीय अनुप कुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
Prevनेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको हो ? यसो भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय
Nextहार्दिक बधाइ रमेश प्रसाइ बुबा बने बधाई दिनेको घुइँचो।
टिकटकबाट करोडौं कमाउने भाइरल मन्दिरा को हुन् ?
विश्वकै सबैभन्दा महँगो र खतरनाक माहुरीको भिरमा ७५ वर्षका बुढा यसरी मह काड्दै छन् (भिडियो हेर्नुस्)